News Collection: चर्चित चलचित्र गसिप
चर्चित चलचित्र गसिप
चार करोडको प्रस्ताव
वैशाखबाटै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र 'दसगजा' नचलाउन भारतीय दूतावासले चार करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको भनेर उक्त चलचित्रका नायक तथा निर्माता नवल खड्काले बताएपछि त्यसलाई सस्तो प्रचारका रूपमा हेरियो।
विनिताको आत्महत्या धम्की
वर्षको अन्त्यमा चलचित्र 'चपली हाइट' बाट चर्चामा चुलिएकी नायिका विनिता बराललाई निर्मात्री कृषा चौलागाईंले आफ्नो चलचित्र 'के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु' बाट हटाउने बताएपछि नायिका बरालले आफूप्रति अन्याय भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूसँग गुहार मागेकी थिइन्। ' न्याय नपाए आत्महत्या गर्ने' सम्म बताएकी विनिताले जोसैजोसमा 'चपली हाइट' साइन गरिन्, तर त्यसो गरेर उनले गलत गरिनन्।
घिमिरेलाई नागरिकताको सिफारिस
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदमा यसै वर्ष पुनःनियुक्त भएका गणेश भण्डारीको कार्यसमितिले निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई नेपाली चलचित्रको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा एवं संस्कृतिमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै नेपाल सरकारसँग नेपाली नागरिकताका लागि सिफारिस गर्‍यो। उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भने भएको छैन।
नक्कल गर्दा दुर्घटनामा
नेपालगन्जमा चलचित्र 'सपथ' हेरिसकेपछि नायक अभय चन्दले एघार तलाबाट हाम फालेको दृश्य नक्कल गर्न खोज्दा एब १० वषर्ीय बालकको दुर्घटनामा परेर हातखुट्टा भाँचियो। दुर्घटनामा परेका बालकका बाबुले चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक प्रमोद भण्डारीसँग क्षतिपूर्ति र बालकको उपचार खर्च मागे।
टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने धनलक्ष्मी यन्त्रको विज्ञापनमा खेलेकै कारणले नायक निखिल उप्रेती र नायिका उषा पौडेलविरुद्ध ठगहरूलाई सघाएको भन्दै नेपाल प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरियो। अनुसन्धानपछि भने उनीहरू मोडल मात्र भएको ठहर भयो।
निर्देशक सोभित बस्नेतलाई कबुलेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै पोखराका कुमार भन्ने व्यक्तिले चलचित्र 'प्लान'को छायांकनस्थलमा हातपात गरेको कुरा सुनियो। अन्ततः चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईको मध्यस्थतामा सोभितले बिस्तारै रकम तिर्ने कबुल गरेपछि झगडा साम्य भयो।
चलचित्र छायांकन हुनु अगावै प्रोमो अर्थात् टेलिविज्ञापनको प्रसारण गरेर निर्देशक प्रसन्न पौडेलले जग हसाउने कार्य गरे। किनभने प्रोमोमा झरना बज्राचार्यलाई नायिकाका रूपमा देखाइए पनि छायांकन हुने बेलासम्म चलचित्र 'मेरो बेस्टप|mेण्ड'मा पि्रयंका कार्की नायिका भइन्। निदेर् शक पौडेलले छायांकन नै नभएको चलचित्रको प्रोमो केका लागि बनाए ? भन्ने कुराको उत्तर कसैले पाएनन्।
निर्माता तथा नायक निर्मल सेन्चुरीले संगीतकार तथा अभिनेता कमलकृष्णलाई निर्देशक बनाएर चलचित्र 'आइ लभ यु टु' निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरे पनि कमलकृष्णले उनलाई छाडेर त्यही स्त्रिmप्टमा केही फेरबदल गरेर रेखा फिल्म्सबाट 'रावण' बनाउने भएपछि सेन्चुरीले जोसै जोसमा निर्देशक दिपक श्रेष्ठलाई लिएर चलचित्र 'पुरानो हुँदैन माया'को छायांकन गराए।
बुटिक व्यवसायी माल्भिका
पूर्वमिस नेपाल तथा 'गुडबाई काठमाडौं' र 'गड लिभ्स इन हिमालयज'की अभिनेत्री माल्भिका सुब्बाले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा बुटिक व्यवसाय थालिन्। केही समय एउटा पत्रिकाको सम्पादकसमेत भएकी सुब्बा यही वैशाखमा विवाह बन्धनमा बाँधिदैछिन्।
श्रीमतीका लागि तीजको व्रत
महिलाहरूको पर्व तीजमा विवाहित रेखा थापादेखि ऋचा घिमिरेसम्म ब्रत बसे भने रोमान्टिक नायक दिलीप रायमाझी आफ्नी श्रीमती मञ्जु रायमाझीको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै तीजको ब्रत बसे। मञ्जुले उनका लागि हरेक वर्ष ब्रत बस्ने गरेकीले यो वर्ष उनका लागि आफू ब्रत बसेको रायमाझीले बताए।
रेखा थापालाई चुम्बन
चलचित्र 'रावण'को छायांकनका क्रममा एक दृश्यमा माया दर्शाउन नायक सविन श्रेष्ठले नायिका रेखा थापालाई ओठमा चुम्बन गर्नुपर्ने थियो। रेखाले ओठमा चुम्बन गर्न त के दिन्थिन र ? यद्यपि उनी गालामा सविनलाई चुम्बन गराउन राजी भइन् तर, जब सविनले उनलाई चुम्बन गरे, तत्कालै रेखाको गालामा एलर्जी भएछ।
प्रदर्शोन्मुख चलचित्र 'शायद'लाई बंगाली चलचित्रका निर्माता तथा वितरक अमरदेव र बंगाली चलचित्रकै निर्माता टिकम शर्माले हिन्दी र बंगाली भाषामा निर्माण गर्ने भनि भारु ३० लाखमा चलचित्र खरिद गरे। उक्त चलचित्र नेपाली र बंगाली कलाकारलाई लिएर रिमेक गरिने बताइन्छ।
चलचित्र दिवसमा भूकम्प
चलचित्र विकास बोर्डले हरेक वर्ष असोज १ गते चलचित्र दिवस मनाउने निर्णय गरेर उक्त दिन बिहान चलचित्रकर्मीहरूको बृहत् र्‍याली आयोजना गर्‍यो। साँझ बसन्तपुरमा मैनबत्ती बालेर दीपावली गरिने कार्यक्रम भूकम्पले गर्दा बिथोलियो। त्यो साँझ देशै हल्लिने गरी आएको भूकम्पका कारण दीपावली गर्न पुगेका चलचित्रकर्मीहरू भागाभाग भएका थिए।
चलचित्र दासढुंगा तथा वृत्तचित्र ग्रेटर नेपालका निर्देशक मनोज पण्डितले एक अनलाइनका लागि चलचित्र ब्रेकफेलको समीक्षा लेखेकै कारण हनुमानढोकास्थित काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बयान दिन जानुपर्‍यो। समीक्षामा उनले उक्त चलचित्रकी नायिका तथा निर्मात्री ऋचा घिमिरेलाई कुनै पनि दृष्टिबाट नायिका नलाग्ने लेखेपछि घिमिरेको उजुरीका आधारमा उनलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थियो।
सोभित बस्नेतको लिखित जवाफ
सोभित बस्नेतले क्यु प्रणालीअन्तर्गत चलचित्र 'राज'पछि 'राज्य' चल्नुपर्नेमा त्यसको स्थानमा 'मेरो लभस्टोरी' र 'अन्दाज' रिलिज भएको र उनको चलचित्र बिहीबारै उतारिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा बस्नेतले चलचित्र निर्माता संघलाई 'हिजडाहरूको संस्था' भनेपछि संघले उनको भनाइप्रति लिखित जवाफ माग्यो।
राजेश हमालकी रहस्यमय प्रेमिका
उमेरले पाँच दशक पुगेका नायक राजेश हमालले यो वर्ष आफ्नी प्रेमिका रहेको रहस्योदघाटन गरे, तर प्रेमिकालाई रहस्यमै राखेर। उनले सञ्चार माध्यमहरूलाई आफ्नी एउटी प्रेमिका रहेको बताइरहे। उनकी प्रेमिकाको नाम मधु भट्टराई भएको रहस्य खुले पनि तस्विर भने वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक भएन।
नेपाली चलचित्रलाई छैन फुर्सद
नेपाली चलचित्रका एक्सन नायक विराज भट्ट यो वर्ष भारतको उत्तर प्रदेशमा बन्ने भोजपुरी चलचित्रमा यति व्यस्त भए कि उनले नेपाली चलचित्र खेल्न एक वर्षसम्म फुर्सद नभएको बताए। तीन वर्षअघि भोजपुरी चलचित्रमा आबद्ध भएका नायक विराजले एक वर्षमै नौवटा भो जपुरी चलचित्रमा नायक हुने मौका पाए। उनले एउटा चलचित्र खेले बापत भारु १० लाख पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ।
राजेश हमाल तीन सन्तानका बाबु ?
महानायक राजेश हमाल आफ्ना तीन सन्तानको बाबु भएको दाबी गर्दै हेटौंडाकी बालकुमारीले प्रहरीमा उजुरी हालेपछि हमाल आफैं बयान दिन हनुमानढोका पुग्नुपर्‍यो। अन्त्यमा ती महिला मानसिक रूपमा ठीक नभएको उनकै दाइले प्रमाण पेस गरेपछि हमालले उन्मुक्ति पाए।
सुष्मा र सुदर्शनको ब्रेकअप
आठ वर्षको प्रेम सम्बन्ध टुक्रयाउँदै नायिका सुष्मा कार्कीले निर्देशक सुदर्शन थापासँग 'ब्रेकअप' लिइन्। जबकि यही वर्ष सुदर्शनको निर्देशनमा सुष्मा पहिलो पटक केन्द्रीय नायिका भएको चलचित्र 'के यो माया हो' सार्वजनिक भयो। सुदर्शनसँग अलग भएपछि चलचित्र 'लुट' मा सुष्माको एउटै आइटम डान्सले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍यायो।
सरकारी छापको दुरुपयोग
पहिलो पटक चलचित्र निर्माणमा उत्रिएको चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी इन्टरटेन्मेन्टले चलचित्र 'भिसा गर्ल' को घोषणा कार्यक्रममा प्रेषित निमन्त्रण कार्डमा सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको भनेर केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रसंग उठेपछि निर्माण समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी माफी माग्नुपर्‍यो।
विनिताको पोस्टर काण्ड
नायिका विनिता बरालले आफ्नो पहिलो चलचित्र 'चपली हाइट' का लागि लुगा लगाएर तस्बिर खिचाए पनि निर्माता अर्जँनकुमारले फो टोसपमार्फत नंग्याएर पत्रिकाहरूमा छपाउनुका साथै प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार सम्मेलन नै गरिन्। पछि उनले उक्त तस्बिर राजीखुसीमै खिचाएको प्रमाणित भयो। बरु त्यसमा प्रशासनले आपत्ति जनाएपछि फोटोसपबाट लुगा लगाइदिएर फेरि पोस्टर तयार पार्न निर्माणपक्ष बाध्य हुनुपर्‍यो।
सुटिङ युनिटमाथि आक्रमण
चलचित्र 'मेरो जीवनसाथी'को छायांकन युनिटमाथि अनामनगरस्थित नुतन स्टुडियोमा छायांकनका क्रममा स्थानीय क्लबको सदस्य बताउने युवाहरूले संघातिक आक्रमण गरे। जसमा छायांकार रामेश्वर कार्की सख्त घाइते पनि भए। क्लबको बोर्ड सुटिङको गाडीले भत्काइदिएकाले युवाहरूले उक्त आक्रमण गरेका थिए।
निशाले तिरिन एक रुपैयाँ जरिवाना
कबुल गरेपछि चलचित्र 'थ्री लभर्स' मा काम नगरेको र एगि्रमेन्टबमोजिम लिएको ५५ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै निर्देशक सुरेशदर्पण पोखरेलले नायिका निशा अधिकारीविरुद्ध चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी गरे। उजुरीपछि संघको कार्यालयमा नायिका अधिकारीले निर्देशक पो खरेललाई उक्त रकमसहित एक रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि सहमतिमै विवाद टुंगियो।
मनीषाको डिभोर्स हल्ला
सम्राट दाहालसँग विवाह गरेको छ महिनामै नायिका मनीषा कोइरालाको पारपाचुके हुने हल्ला चल्यो। सन्तानका विषयमा मनमुटाव हुँदा नायिका कोइरालाले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसले उक्त हल्ला बढेको बुझियो। रक्सीले मातेर मुम्बईमा भेटिएकी मनीषाले अहिलेसम्म पारपाचुके भने गरेकी छैनन्।
दैवीप्रकोपकी दूत रेखा
नायिका रेखा थापालाई दैवीप्रकोप नियन्त्रण अभियानका लागि सद्भावना दूतको जिम्मेबारी दिइयो। प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल -डिपिनेट ने पाल)ले नायिका थापालाई तीन महिनाका लागि सद्भावना दूत घोषणा गरेको थियो।
अमेरिका उडिन युना
सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि नायिका युना उप्रेतीसहितको कलाकारहरूको टोली अमेरिका पुगे पनि स्वदेश फर्किएनन् जसमा हास्यकलाकार गोपाल नेपाल 'फिस्टे' पनि छन्। जबकी अर्का हास्यकलाकार निर्मल शर्मा 'गैंडा' भने स्वदेश फर्किसकेका छन्। नायिका युनाको भने तत्काल स्वदेश फर्किने योजना नरहेको बताइन्छ। उनले फेसबुकमा आफू कार्यक्रमकै सिलसिलामा अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा व्यस्त रहेकाले आफूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद नगरी भ्रामक समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेकी छिन्।
पत्रकारको क्यामेरा खोसेपछि
अनलाइन पत्रिका फिल्मीखबर डटकमका पत्रकारलाई आफ्नो तस्बिर नखिच्न भन्दै क्यामेरा खोसेपछि नायिका निशा अधिकारी फेरि एकपटक विवादमा मुछिइन्। चलचित्र 'लुट' को सफलताका उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा त्यसो गर्दा निशाले सञ्चारकर्मीहरूलाई स्पष्टीकरणसमेत दिनुपर्‍यो। अन्ततः कार्यक्रममै उनलाई माफी मगाइयो।
पहिलो सन्तान सात महिनाको नहुँदै नायिका सञ्चिता लुइँटेल फेरि गर्भवती भइन्। नायक निखिल उप्रेतीसँग विवाह भएपछि यो उनको दोस्रो सन्तान हो।
धेरैपछि चलचित्र निर्देशनमा होमिएका दिनेश डिसी चलचित्र 'मायाज बार'को छायांकनका क्रममा अत्याधिक थकाइ तथा हाइअल्टिच्युटका कारण ७ हजार फिट माथि कालिञ्चोकमा बेहोस भए। छायांकार पुरुषोत्तम प्रधानलगायतको छायांकन टोलीले उनलाई चरिकोट पुर्‍याएपछि होसमा आएर उनी काममा फर्किए।
चलचित्र 'चन्द्रावती' मा राखिएको नायक आयुष रिजालसँगको उत्तेजक दृश्यलाई आपत्तिजनक रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै नायिका शशी खड ्काले निर्देशक राजु गिरीसँग विवाद गरिन्। चलचित्र प्रदर्शनको संघारमा यस किसिमको विवाद आउनुलाई कतिपयले 'पब्लिसिटी स्टन्ट'को संज्ञा दिए।